Ngikhansele i-Akhawunti Yami Basecamp Namuhla | Martech Zone
Ngikhansele i-akhawunti yami ye-Basecamp Namuhla
Esikhathini esedlule, bengingumlandeli we Izimpawu ezingama-37. Ngikholwa ukuthi babephambi kosuku lwabo ekwakhiweni kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi nokulula. Incwadi yabo, Ukuthola Okwangempela, isenomthelela ekutheni ngithuthukisa, ngidizayine, futhi ngakhe kanjani izidingo zomkhiqizo. Ngisebenzise i- Basecamp account futhi ngalandelela amaphrojekthi wami namakhasimende amaningi lapho kusukela ngehlobo eledlule.
Ngenkathi ngifunda i- Izimpawu ezingama-37 blog ngonyaka owedlule, ngibonile ukuthi ithoni yebhulogi ishintshe kakhulu, yahlulela kakhulu futhi yaphela kunokufuna ukwazi nokuhlola. Case iphuzu, lokhu okuthunyelwe. Izimpawu ezingama-37 zichitha ngokuphelele izicelo eziku-inthanethi / ezingaxhunyiwe ku-inthanethi ngombono wokuthi ukuxhuma yinto esizoba nayo sonke, yonke indawo. Nayi imibono yami engiyibhale kubhulogi:
Umbono obuka lokhu uwumngcingo kangangokuba ngishaqeke ngokweqiniso njengomlandeli wezimpawu ezingama-37. Uxuba ukusebenza okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi nokuXhuma kwe-Intanethi.
Lo akuwona umbuzo wokuxhunywa, ngumbuzo wokuphathwa kwezinsizakusebenza. Uma ngingaba nohlelo olusebenzisa izinsizakusebenza zelaptop ngendlela ephumelelayo njengaleyo yeseva, kanye nokulinganisa ukusetshenziswa komkhawulokudonsa phakathi kwalokhu okubili, kungakha umuzwa omuhle womsebenzisi wabo bonke abathintekayo.
Ngiphinde ngangeza inothi ukuthi ukusetshenziswa kwebhomu i-f kwakungeyona neze isidingo. Ku-poll engiyenzile kubhulogi yami, cishe i-40% yempendulo ithi abakuthandi ukusetshenziswa kokucofa kuwebhu. Kokuthunyelwe okuningi, ngikubonile kusetshenziswa ngendlela ehlekisayo… kepha kubhulogi lezimpawu ezingama-37 bekungukulwa… kimi, umfundi ongavumelani nazo. Kwakungenanhlonipho. Ungangizwa kabi, ngiyaxoxa (ngokweqile). Kepha angikwenzi kubhulogi lami lapho ngizama ukuxhumana khona nabafundi bami kunokuba ngibahlukanise.
Inhlamba akusona isizathu sokuthi ngikhansele eyami Basecamp I-akhawunti namuhla, noma kunjalo. Kubasebenzisi abangu-12 ebenginabo, bekungimi ngedwa osebenzise iBasecamp empeleni. Ngicabanga ukuthi omunye umngani wami ungeze into eyodwa yokwenza, ngaphandle kokuthi bekungimi kuphela umsebenzisi wonyaka odlule (futhi ngakhokhela i-akhawunti). IMHO, isivivinyo sangempela sokusebenziseka kohlelo lokusebenza ukuthi abantu bayayisebenzisa noma cha. Amakhasimende ami nabantu engisebenza nabo abenzanga kanjalo. Eqinisweni, ngicabanga ukuthi babekugwema ukuyisebenzisa ngoba bekungeyona leyo ndlela yokusebenziseka kalula.
Akusona futhi isizathu esenza ukuthi ngikhansele. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, i-blog yabo yethule enye i-chunk yokungazi: Abantu abaskroli… ama-imeyili. Mhlawumbe bekufanele bakhulume namakhasimende we-6,000 esiwasebenzelayo athola ukuguqulwa okumangazayo namanani wokuchofoza kuma-imeyili aklanywe kahle adinga ukuskrola. Umbono 'ongenhla kwesibaya' usamile - imininingwane ebonwa ngabafundi lapho beqala ukuvula i-imeyili yiyo ebenza babandakanyeke. Lokho akusho ukuthi abahambi, noma kunjalo! Ngakho-ke - ngaphandle kwemininingwane yokweseka isitatimende sabo esingenangqondo, abafundi be-Signals vs. Noise blog manje bazobakholelwa futhi babhale ama-imeyili angafundisi, awusizo, aklanywe kahle, njll ... konke lokhu ngoba enye ibhulogi yabatshela ukuthi lokhu kwakuyikho phendula.
Isizathu sokuthi ngikhansele i-akhawunti yami ye-Basecamp ukuthi ngilahlekelwe ukukholelwa kumaZimpawu angama-37. Angiqiniseki ukuthi kungukuzikhukhumeza yini ngokukhula nempumelelo yenkampani yabo, kepha ukukhanya kwabo kuphelile. Ngisengumlandeli wokunye ukusebenza okulula kwezicelo zabo… kepha izinhlelo zokusebenza zizonke azibonakali ziguqula ukubukeka komhlaba njengoba zazenzile esikhathini esedlule. Sizobona kamuva, 37! Kwakumnandi ngenkathi kuqhubeka.
Kuyindida ukuthi ngishintshele kwi-iGTD, uhlelo lokusebenza lwedeskithophu.
Tags: Amasiginali angama-37Basecamp
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-6: i-22 PM
Nami, mnumzane, ngacasulwa yi-37Signal post. Kuyacasula nezwe elisathuthuka, futhi.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-8: i-58 PM
Ngiyavuma ukuthi akudingeki ukufunga amabhulogi, uma ungakwazi ukuthola iphuzu lakho ngaphandle kokufunga, ngakho-ke akuyona iphuzu eliqinile lelo.
Kubukeka sengathi kubekwe lapho ukuthola impendulo, njengoba ngibonile ukuthi bekukhona cishe imibono engama-200 kubhulogi lezimpawu ezingama-37.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-10: i-14 PM
UStephen - wavuma. Mayelana nokufunga, yingxenye yenhlonipho engingayiqondi. Ngethalente elincane, usengashaqisa umuntu, uthembeke futhi ubonakale, kepha uhlale unenhlonipho. Angiqondi ukuthi inhlamba ingayisiza kanjani ibhulogi yenkampani.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-10: i-02 PM
Bengihlala ngifunda njalo i-37Signals blog, kepha ngikhungatheke kakhulu ngayo nabantu abangemuva kwayo. Abantu abahlakaniphile, futhi ngikwazile ukugxila kwabo ekulula nasekugxileni kumsebenzisi. Kepha - okufana nalokho okuphawulile - ukugcizelelwa kubhulogi kwaba yinto ekhethekile kanye ne-absolutism (“siqinisile, wonke umuntu uyisiphukuphuku”), futhi ngikuthole kwehlisa futhi kuyacasula.
I-IMHO, abantu abangemuva kwe-37Signals banqotshwe okuthile okubonakala kujwayelekile kakhulu namuhla… ukucabanga ukuthi, ngoba inkampani yethu iphumelele, indlela yethu yokwenza izinto iyindlela elungile FUTHI wonke umuntu angaphindaphinda impumelelo yethu ngokufunda izindlela zethu.
I-Hogwash. Kunabantu abaningi abahlaba umxhwele ngokugqamile nezinkampani ezimangazayo ezaphuma ngenxa yenhlanhla noma isikhathi esibi kanjalo nabantu abanesimilo esihle nezinkampani ezinengekayo eziphumelele ngenxa yenhlanhla enkulu nesikhathi esihle. Baningi kakhulu abantu abacabanga ukuhlangana nezimbangela lapho kungekho khona okunengqondo.
Ngikhetha indlela ethobeke kakhudlwana: Nakhu esikwenzile, nakhu inkampani yethu ikwenzile… thatha kuwo lokho okuthandayo. Mhlawumbe kungakusebenzela kahle, mhlawumbe kuyindlela enyantisayo yenkampani yakho… wazi kangcono.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-10: i-09 PM
Amaphuzu amahle, Adam.
Ngicabanga ukuthi esinye sezifundo zalokhu ukuthi ibhulogi ingaba isibusiso noma isiqalekiso enkampanini yakho. Uma ungumuntu odidayo… lapho-ke ibhulogi yakho izokuveza lokho. Abantu abakuthandi ukusebenza ngamajezi. Ithoni yebhulogi yabo ingikhiphele enkampanini yabo yonke.
Okuhehayo ukufunda inyanga yokugcina yokungenayo bese ukuqhathanisa nencwadi ethi, Get Real. Ithoni ihluke kakhulu ekuqaleni kwayo okuthobekile.
Ngo-Apr 7, i-2007 ku-11: i-13 PM
Ngiyajabula ukubona ukuthi angiyena kuphela umuntu othole ukuthi amaklayenti abo hhayi kuphela angakaze asebenzise iBasecamp, kodwa angaze angene kuwo.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-6: 26 AM
Kufana nokuthi ufunde ingqondo yami, bese uyibhala ngendlela emfushane kakhulu kunalokho ebengingaba nakho.
Nami, angibhalisanga kusuka kuma-37s ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngenxa yokuthi 'siqinisile, wonke umuntu unephutha - sibheke, akusibona yini abahle' isimo sengqondo. Kuyadabukisa, impela. Bangabantu abanamakhono ngokungangabazeki.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-8: 48 AM
Futhi qaphela ukuthi bakhulume ngoMark Hurst / Okuhlangenwe nakho Okuhle esikhathini esedlule, futhi ngikholwa ukuthi bakhulume engqungqutheleni yakhe yeGel. Iphepha le-Good Experience lingelinye lama-imeyili amade engiwatholayo… futhi ngivame ukupheqa kuwo wonke amagama alo.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-10: 54 AM
Amanye amaphuzu: Ngivumelana ngokuphelele nokushintshwa kwethoni, futhi nami sengikucasukele. Impela angiyifundi i-SvN nsuku zonke ngomdlandla engangiwenza. Kodwa-ke, ngithanda ukunikela ngamaphoyinti aphikisayo:
1. Awuzwakali njengekhasimende le-Basecamp elihlosiwe, ikakhulukazi uma ungakwazi ukufaka esikhundleni sokusebenza kwalo ngohlelo lokusebenza lwedeskithophu ezimele yodwa. Futhi uma amakhasimende akho engangeni, kungenzeka ukuthi agcwalisela izidingo zawo ze-PM kwenye indawo.
2. Re: inhlamba, yibhulogi yabo. Ngokwazi kwami, ngingavele ngibe nokuqukethwe okuqondile okuqondile kunokwenziwa okucakiwe okufundwe yonke indawo.
3. Ngicabanga ukuthi bezingacaci, ngicabanga ukuthi zibhekisa ngqo kuma-imeyili wokubhalisa / okusungula, hhayi ukumaketha kwe-imeyili ngokujwayelekile. Khumbula enye yezinhloso zabo ukuthi ibe nenzuzo ngangokunokwenzeka futhi inciphise ukukhungatheka komsebenzisi ngokususa izidingo zosizo lapho kunesidingo khona. Uma bethumela lokhu, kungenzeka babone izicelo eziningi zokuxhaswa ezivela kubantu abangazange bafunde ngokugcwele ama-imeyili abathunyelwe wona. Angiqiniseki ukuthi yikuphi ukukhuthazwa okufanele baqambe amanga lapha. Futhi impendulo yakho ingishaya njengokuzivikela * okuncane * nokuvela ku-POV yomaki we-imeyili (ngilungise uma nginephutha).
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-11: 33 AM
Sawubona SirZ! Wonke amaphuzu amahle, ake ngiphendule:
1. Mhlawumbe. Ngiye kuphela kuhlelo lokusebenza lwedeskithophu ngaze ngathola elinye ithuluzi lokwabelana lokuphathwa / lokuphathwa komkhiqizo. Ngiyakholelwa ukuthi kumele kube nohlelo lokusebenza olukhulu lapho oluzokwabelana namakhasimende - ngiyaqiniseka nje ukuthi iBascamp akuyona ukwahlulela ngempendulo yamakhasimende ami. I-imeyili bekuseyizindlela eziyinhloko zokuxhumana nokwenziwa, izinhloso zephrojekthi, ama-docs, njll.
2. Ngingowokungafihli lutho, kepha ungathola iphuzu lakho ngaphandle kokufunga. Iphuzu lami kulokhu ukuthi akudingekile futhi kuthanda hlukanisa abantu abathile abangathanda imikhiqizo yakho nenkampani yakho. Kungumusa nje ngenxa yenhlonipho.
3. Uqinisile impela, impendulo yami iyazivikela njengomthengisi we-imeyili. Umhlaba we-IT uvame ukwehlukanisa ukuxhumana nge-imeyili ngamaqembu amabili: ukusebenza nokumaketha. Uma iphuzu labo ukuthi Ama-imeyili Wokusebenza akufanele akrolwe, lapho-ke kufanele banikeze isisekelo salowo mbono. Ukumane usho akusenzi kube yiqiniso.
Ngokuya ngamakhasimende ethu, iqiniso libonakala lihluke kakhulu. Anginayo imininingwane eqinile yokusekela ukuphikisa kwami, kepha ulwazi lwami uqobo luphambene impela. I-imeyili yokusebenza yokuthi ungabhalisa kanjani iyi- ephelele indawo yokusebenzisa i-HTML yamakhophi amade ngezithombe-skrini, izincazelo, neminye imikhuba emihle yokuklama. Ngingasho ukuthi i-imeyili yokusebenza iyindawo engcono kakhulu yokuskrola kune-imeyili yokumaketha ngoba lowo obhalisile ulindele ukuthola ukuxhumana!
Futhi ithuba elihle lamathuba we-upsell nokuthengisa okuthengiswayo. Unekhasimende elihilelekile elingase lazise umkhiqizo owengeziwe noma iminikelo yesevisi ngokuya ngokuqukethwe kwe-imeyili oyithumelayo.
Ngo-Apr 16, i-2007 ku-12: i-40 PM
Isixazululo esihle se-inthanethi ongazibamba ngaso (noma usebenzise insizakalo yabo ebanjelwe) yiCopper Project. Inama-flavour amathathu athola ukubiza ngokwengeziwe ngokuya ngezidingo zakho. Ngithola ukuthi ezimweni zami ezingama-90% inguqulo esezingeni isebenza kahle.
Ngenze isilingo se-Basecamp futhi ngokungagwegwesi empeleni akuzange kufinyelele esithembisweni sokuthi yonke le hype ingenze ngakholwa ukuthi izokwenzeka. Ngisenenkinga yokuthola ukuthi bayeke ukukhokha ikhadi lami lesikweletu futhi abasizi kabi kusukela ekugcineni kwabo.
Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende akuyona ingxenye yesichazamazwi i-37Signals engikuthola kudabukisa ngoba bebegibele igagasi elikhulu kangaka le-PR nokuthakazelelwa okujwayelekile. Ekufundeni le bhulogi nabanye kubonakala sengathi baqale ukonakalisa umbono wabo ezimakethe. kubuhlungu nje.
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-12: i-52 PM
Isibuyekezo nje. UDavid Heinemeier Hansson ubuyise ngomusa omkhulu izinyanga ezimbili zamacala ekhadi lesikweletu engangiphikisana nawo. Ngicabanga nje ukuthi inqubo yayinzima kakhulu kunalokho obekudingeka ukuba ibe khona.
Ngiyethemba ukuthi bayakuqonda abakumele kithi. Ama-37Signals abe ngomunye wezingane / izinkampani zeposta zomnyakazo we-web2.0 futhi kungaba yihlazo ukubona leso sithombe singcolisiwe.
Nazi iziphakamiso ezimbalwa ezivela kuCluetrain Manifesto ezibonakala zihambisana kakhulu…
18 Izinkampani ezingaziqapheli izimakethe zazo manje sezixhumene nomuntu nomuntu, ziba nobuhlakani ngenxa yalokho futhi zihlanganyele ngokujulile ezingxoxweni ziphuthelwa ithuba lazo elingcono.
21 Izinkampani zidinga ukukhanya futhi zizithathe ngokungathi sína kangako. Badinga ukuthola amahlaya.
89 Sinamandla angempela futhi siyawazi. Uma ungakuboni ukukhanya, enye ingubo izokulalela, inake kakhulu, ibe mnandi kakhulu ukudlala nayo.
95 Siyavuka futhi sixhumanisa omunye nomunye. Sibhekile. Kepha asilindi.
Lungisa izinto namakhasimende kungenjalo uzosala
He he… ngakho, ukufunga ukuthembeka futhi ukungafungi akulona iqiniso?
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-2: i-07 PM
Bengilokhu ngikholwa kakhulu ngama-37Signals kusukela encwadini yabo futhi ngicabanga ukuthi inkulumo yabo eyisihluthulelo e-SXSW ngonyaka odlule yayinhle kakhulu. Lokho kusho, bengicabanga ukuthi yimina ngedwa othole iBasecamp ingaphansi ngokuphelele. Ngisayisebenzisa nsuku zonke kepha ngiyaqala ukusaba esikhundleni sokuzwa ngikhululekile ukuthi ngigqashule amaketanga wezinhlelo zokusebenza zami zedeskithophu. Ngokuya kwezwi lebhulogi labo, angikwazi ukuphawula ngempela ngoba ngingumfundi nje ojwayelekile, kepha nginomuzwa onamandla wokuthi noma ngubani oqalekisa esimweni “sobungcweti” uzama kanzima ukudlala nabapholile izingane.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-2: i-34 PM
Nami ngokwami ​​ngamangala ukubabona besebenzisa ibhomu i-F kokuthunyelwe kwabo. Njengoba ushilo kahle, akudingekile, futhi ekugcineni kuyingane. Isici "esipholile" sokulwa nokusungulwa saqala ukugqoka mncane kudala. Ngendlela efanayo eyibhulogi yabo, njengoba uSirZ asho, ngazo zonke izindlela, angicabangi ukuthi kukhona umuntu othi akanalo ilungelo lokwenza lokho, kodwa lokho akukwenzi kube ukuhlakanipha, futhi kungabi Kumele ngiyamukele mathupha.
Incwadi yabo yayiyihlaya kimi. Izinkulumo ezivela kubantu ababenesibindi ngenxa yokuba nesibindi. Impela amaphayona amaningi kuzo zonke izimboni akahambi ngokujwayelekile, kepha isimo se-f-off siyahlekisa. Cha, ukuba lula ngenxa yokuba lula AKUWONA umqondo omuhle NJALO.
Bengihlale ngine-bugged ngezifiso zabo zoMzila, noma ukungabi bikho kwazo. Izimpawu ezingama-37 zishilo kaningi ukuthi azifuni ukuthi ojantshi babe abajwayelekile noma "baphumelele kakhulu", futhi ama-fanboys ayidla. Impela… ezingeni eliyinhloko elingaba lihle… kepha ake sibe yipragmatic. Enye yezinselelo ezinkulu uRuby futhi ikakhulukazi abathuthukisi bakajantshi ababhekene nazo ukutholakala okulinganayo kwezindawo ukusethwa kalula ukuthi bazisebenzise. URuby akanakho nje ukutholakala kwe-PHP, noma iPython. Yize ukuthuthuka kungaba yinto yokuzilibazisa, ngikwenza ikakhulukazi ukwenza imali. Nginenhlanhla yokuthi ngikwazi ukwenza engikuthandayo ukuze ngiphile, kepha kusadingeka ngikhokhe izikweletu bese ngondla izingane. Ukucela abantu ukuthi babeke ukholo olunjalo, umzamo nezinsizakusebenza entweni ethile, bese ubatshela ukuthi awufuni ukuthi iphumelele njengoba kungenzeka… ngaleyo ndlela kukhulise inzuzo yokusetshenziswa kwayo… kubukeka njenge-hogwash kimi.
Izimpawu ezingama-37 kudala zafakwa ubuthi yi-hubris. Kuyangimangaza ukuthi kuthathe abantu isikhathi eside kangaka ukuthi baqale ukuyibona. Zikhona njengomshini wokumaketha ikakhulukazi wazo.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-2: i-54 PM
Enye into ebengifuna ukuyiveza iSirZ. Kungakhathalekile ukuthi uKarl unamandla amakhulu kangakanani njengomthengisi we-imeyili, bengingeke ngiyidelele imibono yakhe ngqo. Futhi qaphela ukuthi lokho kumnikeza ukuqonda nolwazi lomkhakha nokuthi yini esebenzayo moreso kunabanye, kufaka phakathi wena, futhi mhlawumbe nezimpawu ezingama-37. Imibono iyodwa ayikwenzi imali, imiphumela ikwenzela imali… futhi uma izindlela zikaMnu Karr ziletha imiphumela, ungubani wena ongazinciphisa?
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-2: i-56 PM
Ngiyavumelana nethoni yebhulogi yabo ethi 'yazi konke' futhi ngilahlekelwe yilokho kulangazelela ukulunga. Ngiphinde ngezwa ukuthi ekwethulweni kweHighrise obekukhonjiswe kakhulu, futhi kukalwe kakhulu njengoba sesikubonile. Ngisenayo i-akhawunti yami yaseBasecamp, kepha ngibheka ngokucophelela.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-3: i-35 PM
Into eyodwa engicasule kakhulu ngama-37signals umkhankaso wabo wokumaketha wabasebenzisi be-Basecamp abangu-1,000,000. Akuthembeki kakhulu, ngoba ngineqiniso lokuthi amaphesenti amakhulu alabo abasebenzisi abasebenzayo.
Nginama-akhawunti okungenani ama-4 ahlukene e-Basecamp, futhi ngisebenzise eyodwa kuphela ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Njengawe uDoug, ngiyabona ukuthi ngephrojekthi ngayinye bekukhona idlanzana labasebenzisi ababengakaze bangene ngemvume, noma bangene ngemvume kanye noma kabili kuphela ukuze balihlole.
Futhi njengoba kungekho demo ebukhoma, ngiyaqiniseka ukuthi abantu abaningi babhalisela i-akhawunti yamahhala ukuze bahlole isoftware, futhi bagcine ngokungayisebenzisi okuthile kwangempela.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-4: i-50 PM
Lelo iphuzu eliheha ngempela, lingikhumbuza ukubalwa kwababhalisile bephephandaba;). Kuyangimangaza ngempela ukusabela okukhulu kulokhu okuthunyelwe! Kubukeka sengathi abantu abambalwa bebelinde inkundla yokuveza ukungeneliseki kwabo.
BTW… lowo omunye umuntu engikhulume ngaye kwakunguwe. 😉
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-6: i-03 PM
Amaphuzu athakazelisayo. Ngiyabonga ngale ndatshana. Kuyathakazelisa njalo ukubona umbono ohlukile (izinto eziningi umuntu azifunda ngamasignali angama-37 online kuyinkazimulo ekhazimulayo).
Ekugcineni ngikhansele i-akhawunti yami ye-Basecamp, kepha ngenza kakhulu iqiniso lokuthi ukusebenza bekungeyona into ebengiyidinga.
Ungathola ukuthi le ndatshana iyathakazelisa:
Amasignali: Ibhizinisi Bloat vs. Isici Bloat
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-10: i-33 PM
Sishintshile sisuka eBasecampe saya kwi-TaskFreak yamahhala (futhi elula) ngesonto eledlule. Siyayithanda, futhi asibheki emuva.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-4: 03 AM
Lokhu kungikhumbuza ukuthi ngidinga ukukhansela i-akhawunti yami. Angikaze ngiyisebenzise ezinyangeni futhi bekuhlala kungenye yezinto ebengifuna ukuzisebenzisa kepha angikaze ngizenze.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-9: 39 AM
Kukhanseliwe nayo manje.
Ngangiyisebenzisa kaningi, futhi namakhasimende ami akazange (njengoba kufakazelwa izinsuku zokugcina zokungena ngemvume). Sibashayele ucingo namhlanje ekuseni, bebuza ukuthi ngifanele yini ukukugcina. Kwangimangaza (?) Ngamunye wabo (4) bathi CHA!
PS, i-imeyili yami kubo:
“Akuhlangene nakancane nempikiswano ephelele ye- 'f-word',
ungaqalekisa konke okuthandayo, nami ngokunjalo…
Inkinga ukuthi ngizibambe ngiqalekisa NGENXA yokusebenzisa
amathuluzi akho futhi ngikuthole kunzima kakhulu ukuthola / ukugcina
amaklayenti ami ukusebenzisa i-BackPack.
Muva nje ngilahlekelwe yiphrojekthi / iklayenti phakathi nezindlela ngenxa yokubi
ukuxhumana (ne-BackPack kudlale indima enkulu kulokhu).
Ingxoxo engahlelekile namhlanje ekuseni iveze ukuthi WONKE amanye amaklayenti ami nawo ayayiqalekisa, ngakho-ke isinqumo besilula…
I-FYI, okunye kokukhathazeka kwami ​​/ kwabo:
- Ukuhlanganiswa ne-imeyili nokugeleza kwephrojekthi 'okujwayelekile' kubi /
engekho (kubonakala sengathi i-High-Rise's cc-imeyili ingaba
- Isiza sihamba kancane kakhulu
- Ukwenza ifayili kunganele futhi kuyisisekelo
- Amathuluzi awahlanganiswanga kahle (amabhodi wokubhala, unyaka ongu-1 kamuva, kuseyi-meta-refresh ye-friggin ?, ngakho-ke inkinobho elula yokubuyela emuva ayisebenzi)
- Amabhodi okubhala, ingxenye engiyithandayo yesayithi lakho, ihlushwa ikalishi, amathuluzi wokufometha olula (iklayenti elilodwa lingitshele ukuthi uchithe amahora amaningi ezama ukuthola uhlu olunamachashazi olungene)
- Okokugcina kodwa ngokuqinisekile, njengoba ngithole nje, ukuthekelisa idatha kubi ngokuhlekisayo. I-WTF inendaba nokukhishwa kweXML, kepha kusamele ngilande wonke amafayela ngokwahlukana, ngigcine amabhodi wokubhala ngokwahlukana, njll. Njll. ”
Wawungaphambili kwekhevu, kodwa lezi yizikhathi ezisheshayo futhi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuzihlola ngobuqotho. ”
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-10: 34 AM
Ngerekhodi asikaze sithi "silungile, wonke umuntu uyiphutha" futhi asikholwa ukuthi "silungile, wonke umuntu unephutha"
Simane sabelane ngalokho okusetshenzelwe thina. Uma konke kukusebenzela, kuhle. Uma okunye kukusebenzela, kuhle. Uma kungekho okukusebenzelayo, kuhle. Thatha noma yiliphi inani olitholayo bese ushiya okusele ngemuva.
Ungahle uthande ukubuyekeza lesi sahluko encwadini yethu:
Uma ithoni yethu ibonakala inolwazi kakhulu, bekezela. Sicabanga ukuthi kungcono ukwethula imibono ngemisho egqamile kunokuthi ube nesifiso ngakho. Uma lokho kuvela njenge-cocky noma ukuziqhenya, makube njalo. Singancamela ukuvusa inkanuko kunokufaka yonke into phansi ngokuthi “kuya…” Impela kuzoba nezikhathi lapho le mithetho idinga ukwelulwa noma yephulwe. Futhi amanye ala maqhinga kungenzeka angasebenzi esimeni sakho. Sebenzisa ukwahlulela nokucabanga kwakho.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-11: 24 AM
Okokuqala - ngiyabonga kakhulu ngokuphendula. Angikaze ngicabange ukuthi lokhu okuthunyelwe okuncane kuzosusa njengoba kwenzeka. Ngiyethemba ukuthi ungabheka ngale kwesitatimende osikhiphile encwadini yakho bese ulalela lokho okushiwo abantu abambalwa kulokhu okuthunyelwe.
Njengoba ucaphuna ibhuku lakho, ngizofaka izinkomba ezimbalwa:
1. Kubukeka sengathi awuzange qasha amakhasimende afanele.
2. Okwakho ubuntu bomkhiqizo wakho ingahle ibe namaphutha athile adinga ukubhekwa.
3. Ukugibela Igagasi Lebhulogi inezikhathi zayo nezaphansi.
Njengoba ngishilo kokuthunyelwe kwami ​​kwasekuqaleni - Ukuthola i-Real kumile isikhathi eside futhi ngisengumlandeli omkhulu. Ngingaphonsela inselelo iqembu lakho ukuthi libuyekeze umbono webhulogi yakho, noma kunjalo. Kubukhali ngempela futhi ngiyaqiniseka ukuthi kungancishiselwa phansi ukusiza ukufundisa abanye hhayi ukubamemeza.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-11: 19 AM
Ngokwami, ngayeka ukuba yikhasimende le-37S ngokususelwa kulwazi lokusekelwa. Ngemuva kokuthola inkinga ngokusungula amaphrojekthi we-Basecamp, ngabhala ngabuza ukuthi kungani amaphrojekthi akhonjiswa njengamakhasimende ami kunami. Impendulo kube yindwangu eyodwa kulayini ka- "Hi Todd. Iphrojekthi ihlotshaniswa neklayenti ngoba yilowo msebenzi ohlotshaniswa naye ”noma okuthile okusondele kakhulu kulokho. Iyindilinga, ayilusizo, futhi amamayela kude nesidingo sangempela, esasizokwazi ukuthi singasiguqula kanjani (duh).
Isicelo sesibili sokwesekwa sathola ukwelashwa okufanayo - ukuzila, ekuphenduleni okuyiphuzu okungazange kusize ngalutho, kulayini "kuyindlela ngoba kunjalo." Isicelo sokwenza ushintsho kwisoftware kulokho ukuxhumana kokusekelwa asiphendulwanga.
Ukuhamba kwami ​​bekungumuzwa wokuthi 'uma unezinkinga ngokwakhiwa kwethu, iya kwenye indawo,' noma okungenani ungazibhali.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-12: i-21 PM
UDouglas, ibhulogi yethu ibilokhu ifana kusukela ngo-1999. Ibhulogi yethu inezwi elifanayo esilisebenzisayo ukukhuluma phakathi kwethu. Asisunguli uhlobo lokugqoka okokuxhumana kwethu komphakathi. Singabantu esiyikho - kokubili nangaphandle kwesiteji. Asenzi izaba. Siyaziqhenya kakhulu ngalokho. Ngifisa sengathi abantu abaningi nezinkampani bezinjalo.
Sabelana ngemibono yethu ngaphandle kwesihlungi. Yileyo ndlela esihlale senza ngayo izinto futhi sizoqhubeka nokwenza izinto. Sikholwa ukuthi kungcono ube nguwe kunokuba ngomunye umuntu - noma ngabe isimo sinjani. Kwesinye isikhathi siyathuka. Into enkulu. Kwesinye isikhathi usibiza “ngokungazi.” Into enkulu. Kokubili kuyacasula ngokufanayo uma ufuna ithuba lokucasulwa.
Asikaze sizame ukujabulisa wonke umuntu. Siyaqonda ukuthi abanye abantu abayithandi indlela esikhuluma ngayo noma indlela esicabanga ngayo noma indlela esenza ngayo. Kulungile. Baningi abantu abangakuthandi nawe. Kulungile. Impilo leyo.
Njengoba unempendulo ngathi, nginempendulo ngawe. Uthe: "Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, i-blog yabo yethule esinye isici sokungazi." Mayelana: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
Ngabe abantu abavumelana nathi kumazwana nabo abanalwazi? Ingabe ukhululekile ukubiza bonke laba bantu njengabangazi? Ngabe uRichard Bird akanalwazi? Ngabe uSteven Bao akazi lutho? Ngabe uBen Richardson akazi lutho? Ngabe u-Amie Gillingham akanalwazi? Ngabe uDave Rosen akazi lutho? Ngabe uScott Meade ovela kuConcept Share akazi? Ngabe u-Anthony Casalena wase-SquareSpace akazi lutho? Ngabe uJosh Williams waseBlinkSale akazi lutho? Ungathumela amazwana kubhulogi yakho noma eyethu uthi bonke laba bantu abazi futhi? Noma ngeke ume ngemuva kwamazwi akho? Ngabe usho ukuthi uthini?
Ngabe uRyan akanalwazi ngokuthumela lokhu?
Ungahle uthande ukubeka eceleni "ukungazi" ngamazwana akufanele njengokucwaswa ngokobuhlanga, ubandlululo, ukucwaswa kwabokufika - hhayi umbono womuntu ngobude be-imeyili.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-12: i-45 PM
Vele labo bantu abasibo abangenalwazi. Abanayo ipulpiti lokuhlukumeza elinabhulogi yakho. Basuke bephawula futhi besekela ngokuya ngombono wabo. URyan naye akayena ongenalwazi. Unikeza umbono wakhe futhi. Ngiyakuhlonipha lokho. Futhi-ke, kwabanye, lowo mbono ungokoqobo. Mhlawumbe labo bantu bahlole futhi bathola impumelelo ngaleyo ndlela.
Okuthunyelwe kwakho akuzange kwethulwe njengombono, kuvezwe njengeqiniso. Ngiyakholelwa ukuthi bekungazi. Ukungazi kuchazwa ngokuthi entula ulwazi noma imininingwane maqondana nesihloko esithile noma iqiniso elithile. Akuhlangene neze nokucwasa noma ukubandlulula, njll.
Ngokwethembeka impela, asikho ngempela isidingo sokuphendula, Jason. Uma ngibheka impendulo yakho, lokhu engikushoyo kuqinisile. Ithoni ishintshile. Lokho kubi kakhulu. Sikufisela inhlanhla kanye nenkampani yakho.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-12: i-42 PM
Ngicabanga ukuthi into yokuthuka yinto engekho. Kulokhu, kungeze ukugcizelelwa okufanelekile. Asizona izingane. Sikhuluma kanjalo. Noma okungenani ngiyakwenza.
Kepha ibhulogi Yezimpawu ezingama-37 ingishaya njengokuziqhenya. Uhlobo lwalokhu "sithole ukuthi i-yall ayilungile kanjani ngalezi zinto" vibe.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-1: i-20 PM
UDouglas, manje uzwakala njengomuntu olahlekile. UJason uza kubhulogi yakho ukushiya imibono yakhe futhi manje umtshela ukuthi angaphenduli? Hlobo luni lokuziphatha kobuntwana lokho?
Ufinyelela futhi ngokusikisela ukuthi okuthunyelwe nguJason kwathiwa kuyiqiniso. Kungumqondo osuselwa kokuhlangenwe nakho kwakhe. Ingcezu ye-op / ed (imibono / yokuhlela). Ucwaningo lwesayensi luyiqiniso. Angicabangi ukuthi uJason angaze abheke okuthunyelwe kwakhe njengokwesayensi, noma iqiniso, noma yini enye ngaphandle nje kombono wakhe osuselwa kulwazi lwakhe.
Futhi ngaphambi kokugxeka, kungani ungambuzanga ngomusa ukuthi umbono wakhe noma iqiniso lakhe? Nginesiqiniseko sokuthi angajabula ukukuphendula. Ngemuva kwalokho uzokwaziswa ngokwengeziwe ngenhloso yakhe. Ungenza ukucabanga noma ukwazi iqiniso.
Okokugcina, angiboni ukuthi ungaphikisana kanjani nomqondo wokuthi umuntu oyedwa akazi lutho kodwa abanye abantu abavumelana naye abakwazi. Akunandaba ukuthi ubani okhulume kuqala noma bakusho kuphi. Bavume bonke. Abahlaziyi bayasisekela isikhundla sikaJason. Ngakho-ke ukholwa ukuthi bonke abazi noma akekho noyedwa kubo ongazi lutho. Awukwazi ukukhetha i-cherry lapho bonke bevumelana.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-2: i-20 PM
1. Re: Sore Loser - Sore? Yebo. Ngibhale iposi ukuletha ezinye izinto engizikhathazayo njengekhasimende langaphambilini futhi umnikazi wenkampani uza kubhulogi lami futhi uyabaxosha. Ubuye axoshe wonke umuntu ophawule kabi. Lokho kuyishwa - benginethemba lokuningi. Ukuhlulwa? Yebo. Ngilahlekelwe yisikhathi nemali ngitshala ithuluzi engingasakwazi ukulisebenzisa.
2. UJason wathi lokhu kwakuwumbono, wase elandela ukuthi iSahluko 1 sencwadi yakhe sithi ibhulogi ingumbono. Okwami umbono (lowo ngumbono wami) bekuhlukile futhi ngikubeke kanjalo.
3. UJason wathi bekungumbono lapha, angidingi ukumbuza. Futhi, khumbula isizathu sami sokushiya bekungekhona nje lokhu okuthunyelwe - bekuwukuvela kwethoni nokulahleka kwenhlonipho nge-SvN kanye nokungasebenzisi isoftware engiholela ekutheni ngihambe. Kwakungewona noma yimuphi umcimbi owodwa, wawuningi.
4. Re: Ukungazi: Usekela ingxabano yami unganakile. Uma i-SvN ibeka isitatimende sengubo yokuthi akekho umuntu oskrola i-imeyili, manje abantu bangakubheka lokho njengeqiniso uma kwethulwa ngaleyo ndlela. I-SvN ayinalwazi ngaleso sethulo, abasekeli abayona Bangase batshelwe okungelona iqiniso, kodwa abona abangenalwazi. Yiso kanye isizathu esenza ngiphonsele inselelo inkolelo-mbono kaSvN - amabhulogi adinga ukujeziswa lapho 'imibono' yawo yethulwa njengeyiqiniso.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-1: i-41 PM
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-2: i-25 PM
Ngiyabonga, Lupe. Yize ngingabheki kuWikipedia ngazo zonke izimpendulo zami, ngiyasithanda isicaphuni:
Enye incazelo ithi ukungazi kuyisinqumo sokungazenzi noma sokuziphatha ngokuya ngemininingwane ethile ukuze uhambisane nezidingo zakho noma izinkolelo zakho.
Lokhu, ngokombono wami, kungani i-imeyili Scroll blog post kwa-SvN yayingazi. Bakhethe ukungaphenyi noma banikeze imininingwane evumelekile ukusekela umbono wabo. Futhi, empeleni, lokho kuvumelana nezidingo zabo njengoba bebexhuma ifomethi yabo entsha ye-imeyili.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-2: i-04 PM
Ngiyawusekela umbono wakho… futhi nansi enye ingxoxo evela ezinsukwini zami e-American Express - ukuhlola umbono wokuthi “abasebenzisi abaskoli” umbono. Nginama-URL ahlukene afakwe kwizixhumanisi phezulu kwe-imeyili nalawo angezansi, kahle-ke, “ngezansi kwesibaya.” Futhi lezi ezingezansi zachofozwa kanye kanye nangaphezulu. Ikhuluma ngekhwalithi nokubaluleka kokuqukethwe. Uma okuqukethwe kwakho kungahambisani, umsebenzisi uyazi ngaphakathi kokuhlola kuqala ngakho-ke uyeke ngaphandle kokufunda okwengeziwe. Ama-imeyili ami abenezinsizakusebenza, amathiphu, nokuthi kanjani ama-cardmember amabhizinisi amancane, kunokuba kukhishwe izikhangiso noma ama-advertising, ahlala abona inani elihle (okusho ukuthi kufika ku-70%) lokuchofozwa kuvela kuzixhumanisi ezansi kwe-imeyili.
Ngizamile ne-basecamp yephrojekthi yeklayenti, kwathi ngenkathi sithumela amadokhumenti amaningi kumtapo wezincwadi / endaweni yokugcina izinto, ngagcina ngenza iklayenti lishintshele kumadokhumenti e-google esikhundleni salokho. ngiyabonga ngemibono yenu.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-3: i-39 PM
Kungani ufonela umuntu ONGANAKILE ngombono wakhe ngobude be-imeyili? Amagama ahle kakhulu lapho ngombono womuntu siqu. Uma ungawuthandi umbono womunye umuntu, kunanzuzoni ukubhala okuthunyelwe okude ngakho futhi udonsele ukunakekela kwakho kokungajwayelekile ngokukhomba ukungazi kwabantu? YITHOLE kakade.
Wenza ubunzima obukhulu ngomuntu oyedwa wenza iphuzu ngokuhlangenwe nakho kwakhe siqu! Ngiyacela, yiba umuntu omkhulu bese uqhubeka.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-3: i-51 PM
Nginesiqiniseko sokuthi leyo mibuzo isivele iphenduliwe.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-6: i-23 PM
Ngabe niphelelwe yingqondo yini ?! Ngitshala amandla amaningi ekutholeni izindlela abasebenzi bami zokuchitha isikhathi esincane besebenzisa ama-imeyili, kunokuningi. Ukufika ephuzwini: Ama-imeyili njengamanje ayisiphazamiso esingalawuleki. Kungani, Emhlabeni, umuntu angahlongoza ukuthi ukujula kwe-imeyili kuyinto efiselekayo?
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-6: i-47 PM
Abasebenzi abachitha isikhathi esincane ku-imeyili nesikhathi esiningi ocingweni noma ubuso nobuso kukhiqiza kakhulu, ngiyavuma.
Ngingathanda ukusika ivolumu yama-imeyili enginawo ngesigamu, kepha ubude bokuqukethwe kulawo ma-imeyili abunjengokusikwa nokomile. Ngicabanga ukuthi kunezizathu ezizwakalayo zokuba nekhophi ende uma kuqhathaniswa nekhophi emfushane. html vs. umbhalo, njll.
Uma sifuna ukonga isikhathi lapho sifunda, masiqede izinkontileka nokunye okusemthethweni kwe-mumbo jumbo. Lokho kusebenza kusichitha isikhathi esiningi futhi kusibiza kakhulu ngehora ukukhokhela abameli ukuze bakuqonde!
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-8: i-29 PM
Yebo, ngazama ukusebenzisa i-basecamp kwelinye lamaphrojekthi futhi akekho noyedwa engangisebenza naye owathenga kuwo. Mhlawumbe kwakuwubumbano lwephrojekthi, kepha ngithole ukuthi yize ngangizimisele ukubeka isikhathi ekuqondeni i-quirky interface, iningi labantu eqenjini lami lalingenjalo.
Kwakunzima impela ukushintsha ingqophamlando futhi uma imisebenzi ethile incike komunye nomunye, futhi waphuthelwa izinto ezimbalwa kwakungekho ndlela yokuhlela kabusha imisebenzi njll.
Ngiyajabula ukuthi ngisebenzise nje uhlobo lwayo lwamahhala futhi angizinikelanga kulo ngokuthenga inguqulo ekhokhelwayo. EMUVA kwesikhashana, kwaba yimina ngedwa ngisebenzisa i-whiteboard njll, futhi ngisebenzisa ezinye izici ezithile zohlelo lwe-IM (olunye umkhiqizo wabo). Ukuzama kwethu nge-basecamp njengethuluzi lokuphathwa kwephrojekthi ye-quasi kube ukwehluleka okuluhlaza. I-interface iluhlobo lwe-quirky futhi ayihambisani kakhulu (kusukela ezinyangeni eziyi-8 ezedlule - angikangeni ngemvume muva nje ngicabanga)
Ngicabanga ukuthi banambitha kakhulu ama-koolaid abo futhi yonke le ndlela yami noma into yomgwaqo omkhulu ngeke isebenze ngokuhamba kwesikhathi. Ngiqonde ukuthi, uma uthi ubeka amakhasimende akho phambili, ungabahlambalaza kanjani cishe ngawo wonke amathuba futhi uphatheke ngayo yonke into ngokungathi ulazi lonke iqiniso futhi wonke umuntu uyisidlakela nje. ?
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-9: i-27 PM
I- "f-bomb"? Yini isikhangiso ** che.
Nginesiqiniseko sokuthi ama-37signals anakekela ukuthi i-turd enamehlo akhanyayo isudi ayifuni ukukhotha i-*** s yabo.
Ungakhathazeki… Ngiyaqiniseka ukuthi uzothola i-bandwagon entsha ongagxumela kuyo manje njengoba ama-37signals engasasebenzi.
Ngo-Apr 9, i-2007 ku-9: i-54 PM
Hhawu uFrank! "Turd in suit" - lokho kwangenza ngahleka. Sicela uthethelele ukuhlela, abanye abafundi bami bangahle bangakwazisi ukuhlekisa.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-4: 44 AM
Ngisebenzise iBasecamp kubo bobabili abaqashi bami bokugcina. Bengikugxeka kahle, ikakhulukazi ngoba uJason Fried & co basebenzisa ama-ultra-pretentious futhi ngokungagwegwesi zonke izinhlelo zabo zokusebenza zifana nokuqoqwa kwedathabhegi nge-UI ehlehla kancane emuva. Ngenkathi ngikhala ngabo, ngangiphinde ngibe ngumsebenzisi omkhulu we-basecamp. Kaningi ngangibuzwa ukuthi “ikuphi imibhalo yalokhu?” futhi bengiphendula, “e-Basecamp… lapho ingeyakho… angithi?” Ekugcineni eyesibili kwadingeka ukuthi ngisungule i-wiki yendawo, eyathola i- okuningi ukusetshenziswa okuningi ngoba kubonakala kunzima ukuthola ulwazi endaweni yokugcina yolwazi efomethwe ngebhulogi. 🙂
Selokhu ngaqala ukusebenza ngokuzimela, ngihlala ngicabanga ukuthi kufanele ngiyothatha i-akhawunti ye-basecamp ngiyibekele eceleni, ngiyilinde ukuthi idingeke. Akukadingeki okwamanje… futhi manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngeke.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-5: 03 AM
Angiqiniseki ngokuphelele ngalokhu, kepha ukusetshenziswa kwe-f-word kungaphefumulelwa ngandlela thile yiZinyoka ze-movie endizeni ezisebenzise leli gama ngokweqile. I-movie kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi "Izinyoka ezindizeni ze-af ****** g" ngenxa yalokhu.
Angikhathali ngabantu abaqalekisa iwebhu inqobo nje uma ingaphakathi kwemikhawulo nangokomongo. Uma kungenjalo, ngiyayiziba nje.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-7: 30 AM
Ngomhlaka 24, ukuba ngumbukiso womndeni wonke, abavunyelwe ukuqalekisa. Ukuphela kwesisho esivumelekile sokukhungatheka sithi "Damn it" - okuphakamise ukuthi abanye abafundi basekolishi baqale umdlalo wokuphuza isibhamu isikhathi ngasinye lapho u-Agent Bauer esebenzisa leyo nkulumo.
Lapho abalobi bethola ngalokhu, baqala ukuphakela imigqa eyayiyi- "damnit damnit damnit" ukubona nje lezo zingane zikhipha izibhamu ezi-3 zilandelana.
Ukubuyisa nje amahlaya kule ngxoxo.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-8: 51 AM
Ukusabela kwami ​​kokuthi “Ukuthola Okwenzeka Ngokwangempela” kungenzeka kube kungakabi yisikhathi kodwa sekuya ngokufanele: Ingqikimba yayo ithi kuhle kanjani ukuba ngama-37signals nokuthengisa i- $ 19 PDF kwabakhulu abangageziwe.
Gcina iso lakho ku-ORGware
yesimemezelo, soooon. Kuzoba insiza oyifunayo.
Nayi iBhodi lethu Labeluleki.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-9: 09 AM
baphila ngenkemba, futhi manje, kahle… ..
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-9: 46 AM
Ngiyabonga Douglas Karr. Angikholwa umzuzu ukuthi i-'f-bomb, 'njengoba uyibeka ngokuhlekisa, bekungeyona isizathu sokuthi ulahle isoftware. Uchithe iningi le-athikili uzama ukusiqinisekisa ukuthi bekungeyona futhi wehluleke ngokusobala. Ngicabanga ukuthi noma yimuphi umuntu okhuluma kancane, angalokothi akhathalele i-blogger 'yezobuchwepheshe bokumaketha' engconyiwe, ngabe ubedlulisa lokho akukhathazayo uma kukhona.
Njengengcweti 'yezobuchwepheshe bokumaketha', kungenzeka ukuthi ungumthengisi kawoyela wezinyoka. Ngokwazi kwami, kumele ube mubi kakhulu kukho.
Ngiyabonga Douglas Karr. Ubukeka u-goofy ngempela.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-12: i-55 PM
Ngabe ngibukeka ngimuhle ngempela? Dang, leso bekuyisithombe sami esihle kakhulu!
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-2: i-03 PM
… Kahle, ngicabanga ukuthi ubugagu bale mpendulo buyazikhulumela.
Njengomfundi wesikhathi eside webhulogi likaDoug kufanele ngifake ukusho ukuthi akakaze ahlangane nobuntu.
Jeez, angikaze ngingene kuma-37signals, kepha ngendlela evikelayo enobudlova, angidonselwanga ngqo esifisweni sokuthola okwengeziwe…
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-9: 59 AM
@John Beeler: Uyazi le nto yokwehluleka ukwenza umsebenzi iyathandeka impela. Ngiyamangala ukuthi kungani zonke izinsiza zojantshi zibukeka cishe zinezinkinga ezinzima zokusebenziseka. (Futhi nje kufanele "uyithathe" ngoba i-DHH noma omunye u-pontif wannabe ukutshele kanjalo ..)
@defenders of the cult: I-SvN nabanye baleli hlelo lokuhlangana bebelokhu bekhulumela phansi abantu. D. Karr unephuzu? ikuphi idatha esekelayo noma idokhumenti? Yebo, ngiyalibona iphuzu lokuthi kuma-EMEIL WOKUBHALISA, kuyasiza ukuwenza abe mfushane aze afike ezingeni, kepha uyazi, ama-imeyili okubhalisa nawo abalulekile futhi abantu banomqondo owanele wokuthola nokubeka phambili ngokuya ngalokho.
Ngokwami, lapho ngithola i-imeyili yokubhalisa evela, yisho umhlinzeki wokusingathwa, futhi inamakhasi ama-3 ubude, akunankinga, angifuni ama-imeyili ahlukene ama-4 omunye ongitshela ukuthi i-akhawunti isethaphu, omunye engitshela i-id yami yegobolondo enye ingitshela lapho ungathola khona usizo nenkonzo yamakhasimende kusuka kokunye kungitshele i-url ku-webgui ukuphatha i-akhawunti yami. Leyo yindlela nje eningi kakhulu.
Engikubonile mayelana ne-37S ukuthi bephula imithetho yabo futhi lokhu kungena kojantshi kanye ne-SvN kanye nawo wonke amanye ama-cronies abawasekelayo (i-TextDrive ne-Textmate ubani?)
Ojantshi bathi BOMILE kodwa ihlaya elinyantisayo! lonke uhlelo lokusebenza ludinga ikhophi lalo lohlaka! uyayibona imithelela yalokhu? Bheka ama-RailsDay2006 okufakiwe. Ukufakwa okungamakhulu ambalwa kuzothatha cishe isikhala esingu-1.5 GB!
Lokhu ukwephula okumangazayo komgomo we-DRY.
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-1: i-30 PM
Ngiyabona ukuthi sekunezingxoxo eziningi lapha, kepha bengicabanga ukuthi ngizofaka amasenti ami amabili. Anginandaba nesiqalekiso. Ngiyawuthanda impela umqondo. Umqondo wonke wamagama athile acasula kakhulu kunamanye uwubuwula obukhulu.
Kepha leyo akuyona inkinga enkulu. Ngiyayibona impela inkinga evela kubafana be-SvN. Uma usho okuthile, yisho ngokuqiniseka hhayi lokhu okuthelwa ngamanzi okubukeka kujwayelekile. Uma uqinisekile ngento ethile, yisho ngaleyo ndlela, ungasho enye futhi.
Kodwa-ke, ngingeza okuthile kulokho engicabanga ukuthi kuyashoda kulesi simo. Uma ngabe ubungalungile ngento ethile, yivume bese uqhubeka. Akukho lutho olubi ngokuba nephutha. Kungahle kulume kancane, kepha ukuthola okulungile kufanelekile. Uma uthatha umbono wokuthi 'siqinisile futhi yilokho' ushiye indlela yokucabanga wangena endaweni yenkolelo. Angisho ukuthi abafana be-SvN bakwenzile lokho. Ngokusobala, banemibono kakhulu ngalokho abakwenzayo, okusebenza kahle kubo.
Elinye iphuzu olivezile kokuthunyelwe kwakho kwangempela, engicabanga ukuthi kufanele ukuliphinda ukwenziwa kokuqinisekiswa ngaphandle kwedatha yokukusekela. Kubaluleke kakhulu ukuthi idatha itholakale. Ukusebenzisa ingqondo akuvamile, futhi, njengoba isipiliyoni sisifundisile, kungaba yiphutha kakhulu futhi. Omunye wemibuzo ebaluleke kakhulu umuntu angayibuza ukuthi: "Yebo, lokhu kunengqondo, kepha ngabe kukhombisa iqiniso (ingabe imininingwane ikhona)?"
Angikwazi ukwenza abantu engisebenza nabo basebenzise i-basecamp, kepha anginasiqiniseko sokuthi ngabe kuyinkinga yini ye-Basecamp, noma ukuthi iningi labantu alijwayele / ukulungele ukusebenzisa uhlelo oluku-inthanethi ngalolo hlobo. Impela, abantu basebenzisa i-imeyili kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ngaphandle kokucabanga ngakho, kepha ukukusebenzisa njalo kuthatha ukuqeqeshwa kwangempela, futhi ngaphandle kokuthi unamathele kukho, kuzobukeka kungokwemvelo. Ngisebenza eNyuvesi kanti ubuhlakani / abasebenzi lapha bamele lokho impela. Abajwayele ukuba nezinsizakusebenza ezitholakalayo manje, futhi ngeke bazinike isikhathi sokuzifunda. Futhi izikhathi eziningi azidingi ngisho.
Ngo-Apr 11, i-2007 ku-9: 19 AM
Ngizamile ukuthengisa i-Basecamp kuklayenti kanye, bakhethe inqubo * yezandla * ngemuva kokuyihlola.
Ngo-Apr 11, i-2007 ku-12: i-25 PM
UDouglas - uma ufuna indawo engenasiqalekiso, i-HTML-imeyili imvelo enekhono ungahlola ukuphathwa kwethu okuhola nomkhiqizo wokuthengisa - http://LeadsOnRails.com. Yize kungesilo uhlelo lokusebenza lwedeskithophu, belulokhu lakhiwa futhi luyaqhubeka nokwakhiwa kusuka kumpendulo yamakhasimende wangempela ukulalela empeleni abasebenzisi abanjengawe.
Ngo-Apr 11, i-2007 ku-3: i-11 PM
Ngicabanga ukuthi ingxenye yayo enama-37s yi-DHH.
Cishe unyaka owedlule kwakukhona okuthunyelwe kubhulogi lakhe siqu (hthobing.co) ngokuyisisekelo ukumisa noma yimuphi umqambi ongahle abe nomsebenzi ongu-9-5 kunokujoyina ukuqala nokusebenzisa ojantshi. Kwakuyisimo sengqondo esifanayo (kuze kufike lapho ungafaka khona ithoni kusuka kokuthunyelwe kuwebhu) - uma ungavumelani nami uyisilima.
Ngo-Apr 22, i-2007 ku-7: i-11 PM
Ngikhumbula ngibona lokhu okuthunyelwe ngonyaka owedlule kepha hhayi i-furore eyalandela. Ngaleso sikhathi nganginezinye izinto ezazisengqondweni yami kepha manje njengoba sengibuyele emuva kulokhu kufanele ngithi izenzo ezingama-37 zezimpawu zishiye ukunambitheka okubi emlonyeni.
Kukhona okuthile okuphezulu ngesimo sabo sengqondo. Yebo ukuzenzisa kungaba incazelo enhle. Bengilokhu ngithole ukwamukelwa kwama-imeyili angaxakile futhi angasho lutho avela kuJason futhi ngingumsebenzisi ojwayelekile.
Amandla abo nakanjani asemakaleni futhi ngalokho ngiyabahalalisela. Kepha izenzo ezinjengalezi ziyabalimaza futhi zicace bha kakhulu kunalokho abaziqaphelayo noma abanakekela ukukuvuma.
Lokho kubonakala sengathi uMat we-37S akaboni ukuthi izenzo / izinto / izinto zithwala * incazelo *. Yebo ukucaphuna umuntu othile kungathathwa njengokuhlaselwa, ukuhlekwa usulu noma yini. Sithi “asikaze sisho ukuthi….” ayanele. Kuyamangalisa ukungazinaki nokuthanda igazi. Ukuthobeka okuthile kuhamba ibanga elide. Ungaba nakho lokho bese uqhubeka "nokuhluka".
Ngiphendukela emikhiqizweni yabo, ngayeka ukusebenzisa iBascamp ngokungathi sína ngoba njengabantu abaningi ngithole ukuthi abanye babengenantshisekelo. Ngicabanga ukuthi isethulo "esilula" singaba yisithiyo. Abantu abawaboni amandla noma kungani lokhu kungcono kunochungechunge lwama-imeyili. Futhi ngikhuluma ngabantu abajwayelekile lapha abangahlomula empeleni ngokunciphisa isikhukhula se-imeyili. Kungumkhiqizo omuhle kepha udinga ukuvuselelwa, uJason athe uzophendula ukuncoma kwami ​​nge-Highrise.
Kodwa-ke ngiyethemba ukuthi abazukuhlala ezikhundleni zabo futhi. Kunezindawo ezimbalwa ezicacile eHighrise okudingeka bazilungise futhi njengekhasimende elikhokhelayo - futhi - ngizobabhekisisa.
May 13, 2007 ku-4: 34 PM
Okuthunyelwe okuhle! Nami ngikhansele i-akhawunti yami ye-basecamp muva nje. Ungasheshi ukushintshela kuhlelo lokusebenza ledeskithophu nokho, kunezinye izindlela ezinhle ze-basecamp ezitholakalayo manje: Goplan ne-OnStage ukubala nje ezimbalwa.
Aug 16, 2007 ku-1: 19 AM
SirZ othandekayo, ake sibhekane nakho: asisoze safuna ukuxoxa ngethuluzi kubhulogi labo uma saneliseka ngalo ngokuphelele. Ngizamile i-basecamp futhi ngakuthola kungalungile ngokuphelele kumaphrojekthi ethu. Akuyona neze ithuluzi lokuphatha iphrojekthi. Bheka le ndatshana ku-PCworld.com. Ngicabanga ukushintshela kulokhu Qhwa ithuluzi, kubonakala kuthakazelisa ngempela.
Okthoba 29, 2007 ngo-2: 07 AM
Hehe. Ukushumayela ekhwayeni. Yebo, ngaphandle kwengxenye emayelana nokuba ngowakho umlandeli we-37Signals; Angikaze ngibe njalo.
Okwalabo abafuna ezinye izindlela ze-Basecamp ngihlanganise uhlu oluningi kusayithi lami le-bitch Basecamp lapha:
Ngiyethemba ukuthi lokhu kusiza labo abafuna izixazululo zokuphathwa kwephrojekthi ngaphandle kwe-Basecamp.
Okthoba 29, 2007 ngo-7: 48 AM
Kuyindida ukuthi ngiyiklayenti lenkampani esebenzisa i-Basecamp njengamanje. Angazi ukuthi ngake ngasho ukuthi limunce… ngezwa nje ukuthi lithola okukhulu futhi bekungaphili ngokuvumelana nalo.
Njengoba ngiyisebenzisa manje, igebe elikhulu kunawo wonke ukuphathwa kwemisebenzi nokunikezwa. Ngingathanda ukubeka phambili imisebenzi, ngibabele, ngithole izilinganiso ekuqedeni (amahora nosuku) bese ngithola isimo (50%, 75%, 100%). Izici zamanje zivumela noma ngubani ukuthi abeke phambili futhi abele.
Jan 20, 2008 ku-12: 40 AM
Ngahlala nabo isikhashana, kepha ekugcineni ngibe nayo nalaba bantu. Eqinisweni ngibeke okuthunyelwe kwami ​​kokugcina ebhodini labo namuhla (kukhiqizwe ngezansi):
“Hhayi-ke, ekugcineni kudingeke ukuthi ngiyikhansele i-akhawunti yami. Kimi uma ubheka ukusebenza kwe-HR kanye nemikhawulo abayibeka kuma-akhawunti wezinga eliphansi, kunezinketho eziningi kakhulu zamahhala noma eziphansi ngaphandle lapho zokuqhubeka lapha. Kubiza kakhulu uma ufuna ukuyisebenzisa neminye imikhiqizo engama-37s efana ne-Backpack kanye / noma i-Basecamp. Esikhundleni sokuthatha umkhiqizo owodwa uwenze ube ngcono (isb. Ukwengeza ukusebenza kwe-HR ku-Backpack) ama-37s kubonakala sengathi akhethe indlela lapho ogcina ukhokha kakhulu kuba yinto engancintisani futhi akukho ngisho nokuhlanganiswa phakathi kwemikhiqizo. Ngikhathele futhi ukuthi "siyazi ukuthi yisiphi isimo sengqondo esihle kakhulu" uma kuqhathaniswa namakhasimende enza iziphakamiso. Kuyihlazo ngoba selokhu kwatholakala ubhaka, ama-37s abenethemba elikhulu kimi, kodwa lokho ngeshwa kuphelile. ”
Lokhu okuthunyelwe sekudlalwe isikhashana kepha bengifuna ukuthola amasenti ami ama-2. Sithembele kakhulu kwisoftware yethu ye-PM. Izinxushunxushu zayo uma singatholi amaklayenti ethu ukuthi ahlanganyele nethimba lethu. Ngenxa yalokho kuncika sisebenzisa iVertabase. Basinikeza insizakalo enkulu yamakhasimende, ukuqeqeshwa futhi bagxile kithi - indlela imikhiqizo emihle ye-SaaS okufanele ibe ngayo.
Nov 25, 2008 ngo-5: 12 PM
I-FWIW, sisanda kusuka eBascamp saya eSharedPlan. ISharedPlan Central igxila ohlangothini lokuhlela ngokusekelwa okuhle kokubulawa. Amashadi we-Gantt, ukufinyelela ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngohlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Mac ne-Windows futhi kuze kube manje, akukho ukuziqhenya; ->
Cishe eminyakeni emibili ngemuva kwalokhu okuthunyelwe, nginentshisekelo yokuzwa ukuthi usebenzisa ini ukuphathwa kwephrojekthi / ukulandelela umsebenzi namuhla.
Ngabe uhlala unelisekile (ngombono wesisombululo) ngesinqumo sakho sokusuka eBascamp?
Sibonile abantu abambalwa beza ngakithi (http://www.smartsheet.com) kusuka e-Basecamp ngonyaka odlule, abanye bacaphuna izizathu ezifanayo nalokho okuthumele ekuqaleni. Abanye babonakala befuna isisombululo esiku-inthanethi esingachofozi kangako ukuhlela.
Lo kuzoba ngumbuzo engizowuphendula maduzane, Maka. Nginesiqiniseko sokuthi ngeke kube yi-Basecamp - ngikhangwa kakhulu izixazululo ze-SaaS ezishayela ngolaka ezinye izici nokuhlanganiswa kuzinhlelo zazo. Njengamanje, angikwenzi ukuphathwa kwephrojekthi - kepha lokho kufanele kushintshe kungekudala.
Mar 2, 2009 ku-11: 22 AM
Hlola http://www.teamworkpm.net - Banomngenisi we-Basecamp nalaba bantu ROCK nje! Bathathe iBascamp ekugcineni bafaka zonke izinto ebesizicela.
May 11, 2009 ku-5: 20 PM
I-Basecamp kuma-Steroid, kususwe ama-37s fluff 🙂
UJun 15, 2010 ngo-10: 18 AM
Ngiyabuzwa ubuhlungu bakho mayelana nokuphathwa kwephrojekthi, ngiyabuthanda futhi kungisiza kakhulu lapho ngenza isenzo sokulinganisa ekuthuthukiseni iwebhu. I-Joomla inkulu ehamba ngemuva kwesiza futhi ingafinyeleleka ngaphambili. Ngiyekile ukusetha lokhu kumasayithi wamakhasimende, kubonakala sengathi abayisebenzisi. Kuhle kakhulu ukugcina izimpahla zesayithi zihlangene!
Ngizobheka iGTD ebengikade ngifuna okuthile okufana nalokhu futhi ngijabule ngaleli thuluzi
Nov 10, 2010 ngo-4: 23 AM
Uxolo lapha ukukhungatheka kwakho. Isoftware ingaphezu kobuchwepheshe… kumayelana nabantu abasemgqeni wezinkinobho. Njengesisebenzi nomsebenzisi, ngiyakukhuthaza ukuthi ubheke iClarizen, eyathola umklomelo ngo-2010 online Project Management Software.
I-Project Software enamandla enezinto eziningi njengokuphathwa kwesikhathi, ukuphathwa kwezinsizakusebenza, ukuphathwa kwezimali nokuhlanganiswa ne-SalesForce, i-Attask, ne-Google….
Kufanele ukubukwa ..
Hhayi-ke, kuze kube namuhla ngibuyela eBascamp! 🙂 Ngibonga ku @howeleadership ongikhulume nayo!
Mar 30, 2011 ku-8: 07 PM
UDoug uke wazama noma imuphi walaba bancintisana abafanelekile abathumele ngezansi ngaphambi kokuthi ubuyele ku-basecamp. Ngokwami ​​ngangithukuthele kakhulu ukungabikho kwenhlangano nokuntuleka kokubambeka lapho ngengeza abantu beMac eBascamp. Ekugcineni ngithole isisombululo esihlanganisiwe. Ngizoyibiza ngokuthi yi-ecosystem yebhizinisi evumela abantu osebenza nabo, amaklayenti, abaxhumanisi, abathengisi, abasebenza ngokuzimela, amalungu ebhodi ukuthi angene emkhakheni wokubambisana wamafu.
Umkhiqizo engiwusebenzisayo unengxenye enkulu yokuphathwa kwephrojekthi / umsebenzi, ikhalenda yokuhlela, inqubo yokubuyekezwa kokuhamba komsebenzi, ukuphathwa koxhumana nabo, izinkundla, ingxoxo ebukhoma, umhlangano we-web cam, ukwabelana kwesikrini njengezici ezingabelwa abasebenzisi namaqembu kuyindlela kupholile. Yizame a http://www.same-page.com
I-FYI - ngivele "ngazikrola phansi". 🙂
Okuthunyelwe Okumangalisayo! Kade ngizama ukuhlanganisa imininingwane enjengale yenkampani yami futhi ngabhala eyami ibhulogi yokuthi kungani sinamathela kwi-Basecamp. Kuhlole uma uthambekele: http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
Mar 13, 2011 ku-8: 53 PM
Ngokwami, ngisebenzisa iBasecamp ngoba bekulula eqenjini lami ukwamukela. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuba nesoftware yokuphatha iphrojekthi.
Ungahle ufune ukuphawula kwami ​​ku-Basecamp, nakulokho okuthuthuke kakhulu UkubambisanaPM
May 8, 2011 ku-6: 37 AM
Sisebenzisa i-basecamp kwaSocial Media Magic ukwaba imibono nokulandela ukuxhumana kwamakhasimende. Asikaze sibe nezinkinga nabo. Angiyena umuntu ongafunda ibhulogi yabo kakhulu, kepha kungenzeka ukuthi lokho bekungumbono wombhali othile. Ngeke ngivumele umbono wombhali oyedwa ungisuse esicelweni esihle kangaka. Sisebenza kanjani isicelo sakho esisha? Ngibheke phambili ekuxhumaneni nawe ngokuzayo!
Jul 20, 2011 ku-8: 27 AM
Kunokuthuthuka okuningi kokusebenziseka okungenziwa ku-Basecamp. Kuyangimangaza ukuthi ayikho enye inhlangano eyakhelwe ngaphakathi kuyo. Indlela esebenza ngayo akukho ndawo ebonakalayo yezindawo ezithile ezigcina ngakho abasebenzisi abasha abeza kuphrojekthi esungulwe kufanele baxhumane nomunye umuntu ukuthola ukuthi bangazitholaphi izinto. (Yebo, NGESINYE isikhathi ungathola izinto oseshweni kepha hhayi njalo.)
Nginawe ngokusetshenziswa kwegama elithi 'f'. Yize noma kwesinye isikhathi ngiyeka ukuthi igama elithi cuss lishelele asikho isizathu sokuthi ungakutholi lokho lapho ubhala. Ngikholwa ukuthi kuwukungahloniphi abafundi bakho futhi ayifanele inkampani exubile. Ngempela kukhona indawo yomehluko phakathi kokuthi ukhuluma kanjani uma uphume nabangani bakho abadakiwe nalokho enihlanganyela ngakho emphakathini.
Aug 19, 2011 ku-12: 03 AM
Hawu! Vele ubone lokhu okuthunyelwe futhi wafunda iningi lamazwana. Amaphenti amaningi esigejaneni. Ngisanda kuqala ukusebenzisa i-Basecamp futhi kunezinto ezimbalwa ezingangiphazamisi ngakho. Enye yazo ukuthi angikholwa ukuthi angikwazi nje ukuthayipha usuku, kufanele ngithathe usuku kokuzivelelayo. Ngempela? Ingabe kukhona engikwenzayo okungalungile? Sizobona ukuthi kuhamba kanjani.
eh, lezo zikhala zebhulogi zazivela ngo-2007 kubonakala… okuholela kimi entweni engicasula ngempela. KWABHALWA nini lokhu okuthunyelwe? 2007, 2008, izolo? ngaphandle komugqa womhla ukuthi ngikwazi kanjani ukuthi imininingwane engiyifundayo isasebenza nanamuhla.
Nginesiqiniseko sokuthi kunezizathu ezinhle zokungalufaki usuku kokuthunyelwe, kepha ngokubuka komsebenzisi, kuyabheda.
btw, ngisebenzisa i-basecamp namanje - ngiyavuma, inakho ukwehla, kepha uma isetshenziswa nezinye izinhlelo zokusebenza zangaphandle ungasebenza ezinkingeni eziningi. Akukaze kube nezikhalazo ezivela kumakhasimende mayelana nokuba nzima ukuzisebenzisa. amasenti ami amabili nje
Sep 2, 2011 ku-12: 48 AM
Kwakuyiminyaka embalwa edlule, uDavid. Okuxakayo… sengibuyile eBasecamp manje. 🙂
Nov 29, 2011 ngo-5: 55 PM
Ngisengumlandeli omkhulu wama-37signals, yize ngikhansele ne-akhawunti yami yaseBasecamp. Bakha umkhiqizo oyingqayizivele futhi enembile… ngaleso sikhathi. Manje ngilindele okuningi. Ngisanda kuqala ukusebenzisa i-KanbanTool - Ngisithanda ngokuphelele isikhombimsebenzisi. Ngiyethemba ngelinye ilanga ngizokhuluma okufanayo nge-Basecamp futhi.
Ngo-Apr 19, i-2012 ku-3: 45 AM
Besisebenzisa i-Basecamp iminyaka eminingana kepha muva nje (cishe unyaka odlule) sisebenzise enkampanini yethu esinye isisombululo sesoftware yokulandela umkhondo kusuka ku-comindware. Ukusebenza okwengeziwe, izinketho eziningi nobuchwepheshe obuguquguqukayo obuningi be-ElasticData. Uma ungakayizami okwamanje - zama.
Ngo-Apr 24, i-2012 ku-3: i-21 PM
Ngingathanda ukuzwa ukuthi ucabangani nge-basecamp entsha. Angiyena umlandeli, kepha ngithola ukuthi i-UI iyathakazelisa. Imicabango?
Ngo-Apr 24, i-2012 ku-4: i-51 PM
Angizange ngiguqule ngoba kunemikhawulo ethile ekuguqulweni. Kepha, kuwo wonke amavidiyo engiwabonile kubukeka njengokusebenziseka okuhle kakhulu nokuthuthukiswa kokuhlangenwe nakho komsebenzisi okuzokwenza kube kuhle futhi kube lula ukubuyela emuva naphambili phakathi kwamaphrojekthi.
Ngo-Apr 12, i-2014 ku-9: 08 AM
Sawubona, i-New Basecamp yinhle kepha isantula kuzici eziningi ezifana neshadi le-gantt, izilimi, ingxoxo eyakhiwe, ukulandelela isikhathi, imisebenzi engezansi njll.
Ngo-Apr 14, i-2014 ku-12: i-39 PM
Angicabangi ukuthi bazoke bangeze ishadi le-gantt futhi uma ngikhuluma iqiniso angithembi. Sisebenzisela amaphrojekthi amancane, namaqembu amancane futhi ukungeza amashadi we-Gantt kungadala ukuthi sisuse ipulatifomu yabo komunye wabancintisana nabo.
Dec 18, 2012 ngo-4: 43 PM
Ngicasulwa kakhulu ngabantu abathi "ukushayisana" esikhundleni sokuthi "ukuthuka." - kubonakala sengathi umnikazi webhulogi oyedwa ubemba ukungcola okudala ukuze enze okuthile.